Georgia ine njodzi kune LGBTQ kudada vashanyi: UNWTO SG yekuGeorgia haina zvataurwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » LGBTQ » Georgia ine njodzi kune LGBTQ kudada vashanyi: UNWTO SG yekuGeorgia haina zvataurwa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Georgia News • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • LGBTQ • nhau • vanhu • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
LGBT Kuzvikudza Georgia
Tourism zvinoreva rugare, kunzwisisa kwepasirese uye kuongorora dzimwe tsika. Izvo zvinoreva zvakare kuenzana uye kushivirira. IRepublic yeGeorgia yakaratidza kunzwisisana kushoma mushure mekunge cameraman yakakuvadzwa zvakanyanya mukuburitsa nezve kudzimiswa kweGay Pride nekuda kwemhirizhonga.
Kuzvikudza haingori kufamba kwepasirese kwenharaunda yeGBBTQ kuti iungane pamwe chete kuratidza mureza, bato, kutaura, uye kunakidzwa, zvakare chiitiko chikuru chekushanya munyika zhinji dzepasirese.
MuRepublic yeGeorgia, mazana akasangana muguta guru, Tbilisi, nemusi weSvondo mushure mekufa kwaAlexander Lashkarava, mumwe wevatori venhau vakarwisa apo mapoka emhirizhonga akapamba hofisi yemushandirapamwe yeLBGT +, zvichikurudzira varatidziri kuti vasiye mhemberero yekuzvikudza munyika ino.
Munhu anotungamira World Tourism Organisation, UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili haana kuda kutaura nezve dambudziko iri kuGeorgia. Zurab anobva kuGeorgia.
IGLTA inhengo yakabatana yeUNWTO, iyo World Tourism Organisation.
UNWTO ine secretary-general anobva kuRepublic yeGeorgia uyo aisada kutaura nezvenyaya inoshungurudza munyika yake mushure mekunge nhengo dzenharaunda yeLBBTQ dzarwiswa, zvichimanikidza kudzimwa kweGay Pride, kufamba uye kushanya kunoshamisa munyika zhinji.
Kumuka kwakaitika muparamende yeGeorgia neMuvhuro apo vatori venhau uye vezvematongerwo enyika vanopikisa vakaedza kupinda mumba yepasi vachipokana nerufu rwemukamera akarohwa panguva yemhirizhonga kune veLGBT svondo rapfuura.
Mazana akasangana muguta guru reTbilisi nemusi weSvondo mushure mekufa kwaAlexander Lashkarava, mumwe wevatori venhau vakakuvara zvakaipisisa sezvo mapoka emhirizhonga akapamba hofisi yemushandirapamwe yeLBGT, zvichikurudzira vanoita zvematongerwo enyika kuti vamise kufamba kwavo kwekuzvikudza.
Dhipatimendi reUnited States neChipiri rakadaidzira runyararo muRepublic yeGeorgia mushure mekufa kwekameramani akarohwa panguva yemhirizhonga kune veLGBT uye vakati avo vakarwisa varatidziri vane runyararo nevatori venhau vanofanirwa kutongwa.
Mutauriri weDhipatimendi reNyika Ned Mutengo akaudza musangano wenguva dzose wekuti Washington yaitevera mamiriro ezvinhu muGeorgia uye yakazvipira kuona kuti avo vane mutoro vanozvidavirira.
"Kuchengetedzwa kwemutapi wenhau wese weGeorgia, uye kuvimbika kwedemokrasi neGeorgia, zvinoda kuti munhu wese akarwisa varatidziri vane runyararo, nevatori venhau musi wa5 na6 Chikunguru, kana avo vakonzera mhirizhonga, vanofanirwa kuzivikanwa, vanofanirwa kuve akasungwa ndokutongwa nemutemo zvakazara, ”akadaro Price.
“Tinoyeuchidza vatungamiriri veGeorgia nevachengeti vemitemo nezvebasa ravo rekuchengetedza vese avo vanoshandisa kodzero dzavo mubumbiro remitemo. Tinovayeuchidza nezvebasa ravo rekuchengetedza vatori venhau vachishandisa rusununguko rwevatori venhau. ”